မြတ်လေးငုံ: သတင်းစာတွေကပြောတဲ့ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံစာအုပ်ကို တိုးမြစ်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီ။
သတင်းစာတွေကပြောတဲ့ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံစာအုပ်ကို တိုးမြစ်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, August 05, 2013
တောဝက်လေးများဘောလုံးအသင်း ဆေးရုံကဆင်း၊ အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြီးနှင့်ကြုံခဲ့ရဟု မှတ်ချက်ပေး - ချင်းရိုင်၊ ဇူလိုင် ၁၈ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်ဒေသရှိ ဂူတွင်းပိတ်မိနေခဲ့သောကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကယ်ဆယ်ရေးပညာရှင်များက ခဲရာခဲဆစ်ကယ်ထုတ်ပေးခဲ...
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့ရှိ အောင်ဇမ္ဗူဘုန်တော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ သွားရောက် - နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့ရှိ အောင်ဇမ္ဗူဘုန်တော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ သွားရောက် *Friday, July 20, 2018* [image: Im...
ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပုံဖော်ထာ...
ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မလမ်း MCCခန်းမမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ...
ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ပြောကြ...
၈၈၈၈ ငွေရတု အထိမ်းအမှတ် အတွက် ပီတိ မြင်ကွင်း
" ငွေရတုမော်ကွန်း " (By ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
(၈. ၈. ၂၀၁၃) မှာ ကျင်းပမယ့် အစီအစဉ်များ
"တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် အမှားဝန်ခံရန် သမ္မတကို ဦးမြင...
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ရဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်...
ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ငွေရတု အခမ်းအနာ...
သတင်းစာတွေကပြောတဲ့ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံစာအုပ်ကို တိုြး...